Mavambo emweya wechitendero - AFRIKHEPRI
Uchapupu hutsva hwokuchera matongo hwekuti vaHeberu vakanga vatema
saturday, chokwadi 4, 2020
Rkuratidza pamatanda ayo maviri, thegehena uye lhupenyu husingaperi, chitendero chinokwevera simba rayo richibvumira mukutya. Kutya saka ndiko kunonyanya kukosha chinhu mune yechitendero mashura uye ayondizvo chaizvoizvo kutya kwevasingazivikanwi (rufu) iyo iri pakabva mhepo yechitendero. Asi murume anotya haasi murume akasununguka. izvozvo anogara munhema uye mukunyepedzera vachitsvaka kugadzikana kwekuchengeteka muchitendero uye vachitarisira upenyu husingaperi.
Kutenda kuti kuna Mwari ane masimba ese kunouya panguva iyo mwana anozoona kuti haakwanise kuwana chengetedzo yakakwana muvabereki vake vaak vakatenda kusafa asi vakundwa nerufu. Zvino, mwana nenzira yekudzivirira yeiyo ego achavabvisa ivo nepfungwa. aya ndiwo maitiro ababa naamai vasina kufa nemwana vachiva mwari uye déesse. Imakanika yababa imago anova mwari wake.
Chitendero chinobva kuda kwake kusvika pamasimba emwana uyo fungidziro uye inogadzira chombo chinomiririra baba chaivo (kana amai) uye ndianiIwo mutemo fananidzo yechiremera chevabereki.
Zvitendero zvinotora simba ravo nekutya. Ichi ndicho chikonzero ivo vanogara vari pasi pemakakava, kusabatanidzwa nehondo. Pakati pezvinyengeri zvechitendero nekutendeuka, chitendero chinouraya muzita raMwari. Asi vatendeuki ava, vamiriri venhau dzakanaka vanongopara mhosva sevatsvene. Ivo vanongogutsa chishuvo chavo chehukuru.
Chitendero ndiyo opium yevanhu nokuti iyo mamiriro ezvinhu uye anotinunura mumutambo wemafungiro asina kunaka. Iyo inopa kunyepa kwekubvisa kutambura kuripo uye saka inoshanda seanorgesic yeiyo limbic system. TheChitendero chibereko chekufunga. Ngatitarisei uye tione zvinhu kubva pane zvitsva uye rega kutenda muchokwadi chezvifananidzo zvakagadzirwa kuburikidza nejeri rekusaziva kwako. Ngatiswederei pasi nemweya wakasununguka uye tirarame kuvapo kwedu zvizere nekuti tinogona kuziva Mwari chete pakuratidzwa kwerudo rwake. Saka tinodanana nekuti ichi ndicho chaizvo uye ndicho chega chinamato.
Iyo sublimation yemanzwiro
Kukunda Girasi Tsvene
Igovera ZVAKO ZVAKAWANDA
Dzvanya pane icon yemagariro kuburitsa chinyorwa.
Afrikhepri Foundation Sur Masayendisiti anoona kuti kutsanya kunokonzera kushandiswa kwemaini: "Kutsanya kunobatsira kudzivirira kubva kuchirwere cheuropi. Kutsanya kunoderedza njodzi yako yechirwere chemoyo uye ..." Chikumi 24, 22:48
Afrikhepri Foundation Sur Serena Williams anovaka zvikoro muUganda, Zimbabwe, Kenya uye Jamaica: "Ndatenda Serena nekuzvipira kwako kuita dzidzo mu Africa!" Chikumi 24, 22:40
Afrikhepri Foundation Sur Bhagavad Gita (PDF): "Bhagavad Gîtâ, zvinyorwa zvikuru zvechiHindu nehunyanzvi hweIndia, nderimwe remavara eVedânta, mune…" Chikumi 24, 22:21
Dzvanya apa kuti usiye chirevo ...x